4 Fampiharana ny Andro famaranana an'i Tiorkia Natao ho an'ny fahatokisana ny fandriampahalemana | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENY4 Natao ny fampiharana ny Andro Fialohazana any Turkey
Ny famerana ny isan'andro fahatokisana turki dia natao mba hanatanterahana ny fandriampahalemana
Tale jeneralin'ny Ministeran'ny fiarovana Içia, ny komandin'ny jeneraly Gendarmerie sy ny mpiambina ny morontsiraka amina firenena amin'ny ankapobeny ao amin'ny Torkia Confidence Peace application dia natao tamin'ny 21 Mey 08.00-24.00 ora.
Manaraka ny fanao, alohan'ny fe-potoana 4 andro izay hampiharina mandritra ny Eid al-Fitr; Ny fepetra noraisina hiadiana amin'ny karazana coronavirus vaovao (Covid-19) dia nohadihadiana.
Nandritra ny fanamarinana, dia nasiana tombana na nanatanteraka ny fanapahan-kevitra ny toeram-piasana izay mihidy tsy tapaka, ary na ireo toeram-piasana izay haverina am-pamerenana indray no nanompo tamin'ny ora voatondro.
Nandritra ny fanamarinana, dia nohamarinina na ny olom-pirenena miandry ao anatiny sy ivelan'ny filaharana eo amin'ny toeram-piasana toy ny tsena an-dalambe, fivarotam-birao, tobin-tsolika dia voatery manao ny elanelana sy saron-tava, ary ny tsena mifehy ny lalànan'ny faneken'ny mpanjifa, misy olona 10 isaky ny 1m².
Na ny olom-pirenentsika latsaky ny 20 taona sy ireo 65 taona no ho miakatra, manaiky ny curfew, dia mifanaraka amin'ny fanapaha-kevitra.
Mpiasa 53 896 no nandray anjara tamin'ny fampiharana
Miisa 8 392 ary alika mpitsikilo 53 no nandray anjara tamin'ilay fampiharana, izay nirefy 896 217 isa. Raha ny fomba fampiharana izay natao hatrany nanerana ny firenena, olona 743 no fantatra fa olona no fantatra ary olona 31 no nalaina am-ponja.
Ireo fomba fiasa ara-pitsarana sy ara-pitantanana izay mihatra amin'ny 3 930 olona tsy mifanaraka amin'ny lavitra ara-tsosialy
Ny fizotran'ny raharaha ara-panjakana sy ny fitsarana dia ampiharina tamin'ny olona 2, anisan'izany ny 260 20 tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny halaviran'ny fiaraha-monina, 1.384 65 eo ambanin'ny 286 taona, ary 3 tamin'ny 930 taona no ho miakatra. Fiara 159 arivo 694 no voamarina, 98 862 tompona fiara / mpamily no nomena sazy ara-panjakana.
Raha ampiharina dia fiara 1.396 no voarara tamin'ny fifamoivoizana, fiara 5 no tratra no hita, ary mpamily 43 no nahemotra.
Zaridaina 10 254, zaridaina 4 938 103 ary faritra manodidina ny 785 XNUMX no natao maso.
Ny lamandy ara-panjakana sy ny fitsarana dia nampiharina tany amin'ny toeram-piasana 17, 18 manitsakitsaka ny lalàna famaranana tsy voafetra, 115 miasa ivelan'ny ora fiasana voafaritra, ary 150 tsy mampihatra ny lalàm-pifandraisana sosialy.
Ankoatra izany, basy 5 tsy nahazo alalana, basy tsy nahazo alalana roa, basy poleta 25, bala 2, fitaovana fanendahana / fanindrona, magazine pistola 254 sy faritra isan-karazany, 4 g cannabis, 5 g heroin, 23 g bonzai, 4 g methamphetamine, babo 101, zava-mahadomelina 23, 25 fonosana feno sigara mpandositra ary zava-pisotro 101 litatra litatra.
Andro faha-4 famerana ny 'fampiharana ny fandriam-pahalemana ao Turkey "
Alohan'ny Ramadany any Torkia Firenena General Practice natao Peace Trust
Aiza no hisokatra ao anatin'ny famerana ny làlana mandritry ny 3 andro ..? Ireto ny antsipiriany
Ny fanandramana Metro sy Metrobus ao Istanbul fameperana andro 4 andro
Yildiray Kocarslan nanamarina ny fitokisana
Ny fivoriana talohan'ny fizarana dia natao tao amin'ny Centre Ski Centre Erciyes
Fiarandalamby am-pilaminana amin'ny Lalao Lego (Video)
Hitsimbina ny fandosiran'i Erciyes
Manome toky ny manampahefana hanomboka ny Railway Baku-Tbilisi-Kars amin'ny 2013
Ny filohan'ny Fikambanan'ny Railway Lovers Demirel dia nanamafy
Atilla Demirtunç nanamarina ny lehiben'ny mpikarakara ny sampan-draharahan'ny fifamoivoizana
Ny tatitra fahatelo amin'ny seranam-piaramanidina EIA, Yıldırım, dia noraisina talohan'ny fanamafisana
Nitsidika an'i Veysi Kurt ny filohan'ny Gülen Güven
Fameperana Coronavirus amin'ny hetra ara-barotra amin'ny Ministeran'ny Atitany